A New Virus Nightmare? WTN Inodaidza Global Vaccine Mandate uye Kuenzana muKugovera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Wtn » A New Virus Nightmare? WTN Inodaidza Global Vaccine Mandate uye Kuenzana muKugovera
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Wtn
South Africa iri mukuvhunduka uye kutsamwa mushure mekuonekwa kweOmicron strain yekoronavirus.
Husiku, indasitiri yekufambisa neyekushanya ichitarisira kupenya kwakajeka kumagumo emugero, yakadzokera muzera rerima nekuvharwa kwemiganhu, kudzima ndege, uye hutachiona husingazivikanwe huchityisidzira hutano hweveruzhinji nemararamiro.
Nhasi, nyika yakatarisana nerimwe dambudziko rehutano hweveruzhinji nekuonekwa kweasati azivikanwa asi anogona kutapurirana zvakanyanya uye ane njodzi Omicron dhizaini yekoronavirus. Chirwere ichi chakatangira kuSouth Africa, uye chakaonekwa zvakare mune imwe nyaya iri yega kuHong Kong neBelgium.
23.8% yevagari vemuSouth Africa vakabayiwa zvizere, uye munzvimbo zhinji dzeAfrica, nhamba iyi iri munhamba imwe chete, pasina mushonga wakakwana.
Tourism inoda kubatana kwenyika zvino kupfuura nakare kose umo nyika dzinobatsira nyika dzadzo.
Dr. Peter Tarlow, Mutungamiri weWTN, vanoyeuchidza nyika kuti nyika dzese dzinogovana pasi diki iri uye kuti tinofanira kushanda pamwe chete kubvisa COVID-19 kwese kwese pasi.
Kurwisa COVID harisi basa renyika chero ipi zvayo, asi renyika dzese nematunhu anoshanda pamwechete kune hutano uye nyika ine runyararo.
Juergen Steinmetz, Sachigaro WTN
Sachigaro weWTN, Juergen Steinmetz, akawedzera kuti: “Kugovewa kwakaenzana kwemajekiseni munyika dzese kwakakosha. Ngatiyeuchidze nyika: Hapana akachengeteka kusvika munhu wese abaiwa!
Izvi zvaizivikanwa kubva pakutanga apo Mutungamiriri weAmerica Biden akati achangogadzwa, Hapana akachengeteka kudzamara munhu wese akachengeteka.
Nekusatevedzera mitemo yesainzi, zvimwe zvakasiyana-siyana zvehutachiona zvakaita seOmicron strain zvinogona kukura zviri nyore. Misiyano yakadai rimwe zuva inogona kunzvenga dziviriro yedu yekudzivirira, zvichimanikidza nyika kutanga pese.
Iyi injodzi iyo vanhu havagone uye havafanirwe kuitsigira.
Kunyanya, munyika umo jekiseni isingawanikwe, kutyisidzira kukonzeresa mamiriro ehutsinye akadai kwakakwira.
Mamiriro ari kuitika muSouth Africa ave kuparadzanisa nyika 8 nehusiku kubva kune dzimwe nyika dzekufamba uye kushanya uye ari kukanganisa hupfumi. Izvi zvinofanira kunge zvichitimutsa tose.
Kungovhara miganhu pakati penyika ingori gadziriso yenguva pfupi. Nyika ino yakabatana, uye hutachiona hahuremekedze miganhu. Kiyi inozivikanwa kuvanhu panguva ino ndeyejekiseni.
Izvi zvinosanganisira kugovera kwakafara uye kune tariro kwakakwana kwese kwese, kwakasununguka kubva pakuwana mari kana kudziviswa, chimiro chezvematongerwo enyika, uye zvimwe zvikonzero zvepasi.
The World Tourism Network zvakare inoda kudzoreredzwa kwemitemo yepatent uye zvibvumirano zvepasi rese kuvimbisa kuwanikwa kwakakura uye kwakakwana kwejekiseni rinoshanda kwese kwese.
VaCuthbert Ncube, sachigaro weAfrican Tourism Board
Iyo World Tourism Network, semubatsiri akakosha we African Tourism Bhodhi (ATB), inonzwira vanhu muSouthern Africa, uye kunyanya kushamwari nenhengo dziri muindasitiri yezvekushanya nekushanya.
Sachigaro weATB, VaCuthbert Ncube, vakabuda pachena panyaya dzekugoverwa kwejekiseni rakaenzana uye kurerutswa kwezvinodiwa patent kuti izvi zvifambire mberi.
Mamiriro ezvinhu aya anotora hutungamiriri hwakakomba kupfuura kushanya, uye tese tinofanirwa kusundidzira nekutsigira chero chirongwa chinovimbisa ichi chinangwa chevanhu chekuwanikwa kwekudzivirira.
Hutungamiri hunoshanda husina hudyire muUNWTO, WHO, muhurumende, uye mumaindasitiri akakosha hwakakosha kupfuura nakare kose nhasi.
WTN inotsigira danho rekudzivirira kana richitsigirwa neSainzi uye Hutano Vakuru, uye kune avo vanokwanisa kugamuchira vaccine zvakachengeteka.
Zvimwe paWorld Tourism Network uye nhengo: www.wtn.travel